Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 3, 2018 | နိုင်ငံခြားဘာသာစကား
မတူညီနှင့်ကျယ်ပြန့်ကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်က်ဘ်ဆိုက်များ (ဖတ်နေ, ရေးသားခြင်း, ဝေါဟာရ, စာပိုဒ်များ, သဒ္ဒါ, etc)
လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူသိမ်းသွင်းဖို့ဗီဒီယိုများနှင့် podcasts တွေကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး
'' ဎ Learnဘယ်နေရာမှာမဆို မိုဘိုင်း application များမှတဆင့်
Buenos Dias! သငျသညျစပိန်ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုသလား?
ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏဆိုသလိုမလုံလောက်ပါ၊ စပိန်လူမျိုးသည်သန်း ၅၀၀ နီးပါးရှိပြီး ၂၁ နိုင်ငံ၏တရားဝင်သို့မဟုတ်အမည်ခံတရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဤကြီးမားသောကိန်းဂဏန်းများသည်ယနေ့ခေတ်တွင် Mandarin ဘာသာစကားနောက်ကွယ်တွင်ဒုတိယမြောက်အများဆုံးသောဘာသာစကားဖြစ်သည်။
ဤအကိန်းဂဏန်းများအပြင်, က 40 တိုင်းပြည်ကျော်ပြန့်နှံ့သန်း 90 ကျော်သင်ယူသူနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်ပြီးနောက်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအများဆုံးလေ့လာခဲ့ language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်ကျွမ်းကျင်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာသည်။
ဒီအပြင်, ကုမ္ပဏီများမှလည်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်တောင်အမေရိက၏စျေးကွက်စီးပွားရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အောင်မြင်မှုဟာ Vector ကြည့်ဖို့စတင်ပါ။ အမှန်စင်စစ်သင်သည်သင်၏လေးကိုမှဓမ္မ string ကို add ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအများဆုံးပြောပြီဘာသာစကားသင်တို့သိကြ၏။ သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့ခရီးသွားလာပါကအမြဲအသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်!
ပြင်သစ်အဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောစပိန်အဖြစ်အခြားလက်တင်ဘာသာစကားကအရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ပုံရသည်နှင့်သင်လျင်မြန်စွာသင်ယူခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်လေ့လာပါ။ ရိုးရှင်းစွာအကနည်းနည်းထည့်ပြီးကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်တော်တစ်ဦးပြည့်စုံလမ်းညွှန်အတူတူဝတ်! သင်ဖတ်မယ့်ပြည့်စုံပြီးလွယ်ကူဆောင်းပါးထဲမှာအတူတူသင့်ရဲ့သင်ယူခြင်းစပိန်မှာအားလုံးအရင်းမြစ်များစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု Make: အစပြုသူ, အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအဆင့်တွင်သင်သည်သင်၏အဆငျ့အတိုငျးအရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့! မှပေးဆောင်သို့မဟုတ်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုမှတဆင့် Going: အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်များ, မိုဘိုင်း apps များ, ဗီဒီယိုများ, podcasts တွေကို, အထူးပြုက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်လွတ်လပ်စွာသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစတင်အပေါငျးတို့သ turnkey ရပါလိမ့်မယ်။
ယခု မှစ၍“ No Comprendo” သည်သင်၏ဝေါဟာရ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တော့မည်မဟုတ်!
web ပေါ်မှာရရှိနိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ယေဘုယျကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်! ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်များ, အထူးပြုနှင့်သမဝါယမက်ဘ်ဆိုက်များ, မဂ္ဂဇင်း, အဘိဓါနျ, အရှိဆုံးပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရွေးကောက်တော်မူပါတယ်။ သူများသည်အခြေခံအားဖြင့်သင်သည်ဘာသာစကားအပေါငျးတို့သရှုထောင့်လေ့လာသင်ယူသို့မဟုတ်တိုးတက်လာဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဝေါဟာရပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, ဖတ် conjugation, ရေးနှငျ့သငျကငျြ့သုံးကြဘူး။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်? ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်ကော်ဖီကျော်, အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့စိတ်ချလက်ချစကားပြောရန်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မကြောက်ပါနှင့်။
နာမည်ကြီးဘီဘီစီ၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်, အင်္ဂလိပ်သင်ယူဖို့သတင်းအချက်အလက်ရွှေမိုင်းဖြစ်ခြင်းမှတပါး, ကလည်းအခုမှစများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးအလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်ကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများကမ်းလှမ်း! သဒ္ဒါ, ဝေါဟာရ, ထိုကဲ့သို့သောရေဒီယို, တီဗီ, ဗီဒီယိုမဂ္ဂဇင်းအဖြစ်မီဒီယာများ၏ကောင်းတစ်ဦးထိုးနှင့်ရောအသုံးအနှုန်းတွေ။ တိုတိုမှာ, ဘာသာစကားသင်ယူမှု၏လယ်ပြင်၌ရှိသကဲ့သို့လေးနက်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်က၎င်း၏ရာထူးစောင့်ရှောက်။
“ #jeveuxparler” ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အသစ်ကိုစီအန်အက်စ်အမ်ကစီစဉ်ထားသည်။ ဤသည်အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်တယ်လီဖုန်းပြောဆိုမှုများကမ်းလှမ်း။
သငျသညျသယံဇာတများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုအကန့်အသတ်မရှိဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်နှင့်သင်၏သုံးလ,3လသို့မဟုတ်6လကြေးပေးသွင်းရွေးချယ်ပါ။ စပိန်စကားပြောသင်တန်းနည်းပြများနှင့်မိနစ် ၃၀ စကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းမှတဆင့်ပါးစပ်လေ့ကျင့်ခြင်းကဲ့သို့သောသီးခြားအစည်းအဝေးများကိုလည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင့်ကိုတိုးတက်စေရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအစီအစဉ်ထက်မကပါ။
ဒီပလက်ဖောင်းမှတဆင့်အခမဲ့စပိန် 100% သင်ယူပါ
အဲဒီမှာတင်ပြကြသည်စစ်မှန်သောသမဝါယမ site ကို, သင်တန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးရုံ validation ကိုမော်ဒပြီးနောက်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဝင်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အားသာချက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤပုံစံကိုလည်းသင်ခြေထောက်ပေါ်တွင်သင်၏လက်၌အရအကြောင်းအရာကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်အဆောက်အဦရန်သင့်သောကျောက်ကိုရောက်စေဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။4သန်းအကောင့် created နှင့်အတူ, သင်လဲလှယ်ဖို့ breakneck မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုအဆင့်ဆင့်, စာလုံးပေါင်းအတွက်သင်တန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း, သဒ္ဒါ, အသံ, အသံထွက်လေ့ကျင့်ခန်း, ဂိမ်းများ, ဖိုရမ်များမှာတိုးဖို့ခွင့်ပြု, သင်နောက်ကွယ်မှတကယ့်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ် ရပ်ရွာနှင့်အတူ ... မရှိသလောက်အဖြစ်အများအပြားအကြံပြုချက်များနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် tools များနှင့်အတူ site တစ်ခုရှိပါတယ်။
Veinte Mundo :
ဤတွင်စပိန်စကားပြောနိုင်ငံများယဉ်ကျေးမှု, ရှုခင်းများ, အချက်အပြုတ်အထူး, ပထဝီနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ဆောင်းပါးများပါဝင်သည်ရာဖြည့်ညှင်းခြင်းမရှိဘဲဖတ်ရှုဖို့အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း၏အခြားအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆောင်းပါး Podcast တခုကိုအဖြစ်ရရှိနိုင်ကာအသံဖိုင်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။
အရင်ကဆိုရင် for: အသင်ယူမှု tool ကိုအခမဲ့စပိန်အွန်လိုင်းသင်ယူမှုကိုစတငျဖို့လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ , ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးအနှုန်းတွေဘန်းစကား, ကိန်းဂဏန်းများ, မူလတန်း: ဒီလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်အပြန်အလှန် tool ကိုသင်စပိန်ဘာသာစကား၏အခြေခံဆည်းပူးဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းတွင်ရှိသည့်ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်း။ စပိန်စာအရေးအသားနှင့်အရေးအဖတ်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းတွင်ဆောင်းပါးများပါရှိပြီးစကားလုံးအသစ်များကိုသင်ယူရန်အထောက်အကူပြုသည့်ဝေါဟာရစာရွက်များလည်းပါရှိသည်။ အဲဒီမှာအွန်လိုင်းစာမေးပွဲများ၊ ဘာသာစကားနှင့်ပတ်သက်သောအကြံဥာဏ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏အသံထွက်ကိုနားလည်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်လေ့ကျင့်ရန်အတွက်စက္ကူအပြည့် + ဒီဂျစ်တယ်စပိန်စာဖတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအထုပ်မျိုးစုံရှိသည်။ ဤ site သည်သင်၏အသင်း ၀ င်areaရိယာကိုဖန်တီးသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်နားလည်လိမ့်မည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အဆိုပါဖော်မြူလာအားလုံး chargable ဖြစ်ကြသည်။ Vocable သည်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ဘာသာစကားတည်းခိုနေထိုင်မှုကိုအထူးပြုသည့်အသိအမှတ်ပြုထားသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင်ဘာသာစကားသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ထားသည်။
အက္ခရာ၊ အသံထွက်၊ စာလုံးပေါင်း၊ စကားစု၊ စကားစု၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာစသည့်သင်ခန်းစာအမြောက်အများကို လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာအသုံးပြုနိုင်သည့်အလွန်လွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသင်ခန်းစာသေးသေးလေးတစ်ခုရှိပြီး“ စပိန်သမိုင်း” မှ“ စပိန်နိုင်ငံဘောလုံး” အထိဆောင်းပါးများလည်းပါ ၀ င်ပြီးပိုမိုသိရှိရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။
Golodrina အကြားတွင်စပိန် :
တစ်ဦးကကနေဒါက၎င်း၏ website တွင်အခမဲ့သင်တန်းများပေးထားပါတယ်။ သဒ္ဒါ, ဝေါဟာရစာရွက်များ, လေ့ကျင့်ခန်း, လက်တွေ့ကျသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းသင်ယူခြင်းကိုစတင်။ သူမသည်သင်သာရုံစတင်ခဲ့ပြီး, သင်အရာအားလုံးကိုဖြစ်နိုင်တွေ့မြင် ... ပြီးတော့သာစာအုပ်များနှင့်တိပ်ခွေနှင့်အတူသူမတစ်ပတ်လျှင်တစ်ဦးလူတန်းစားနှင့်အတူသူမ၏အလုပ်သင်စတင်ခဲ့ကြောင်းကရှင်းပြသည်!
၂၁ နိုင်ငံတွင်ပြောဆိုသောစပိန်ဘာသာစကားသည်တိုင်းပြည်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောစကားလုံးများဖြင့်စကားလုံးများရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အထူးကောင်းမွန်ပြီးလက်တွေ့ကျသောဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အထူးပြုချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိုင်းပြည်ပေါ် မူတည်၍ စကားလုံးများ၏အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး (ဘန်းစကားသို့မဟုတ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောဝေါဟာရများ) ကိုရှင်းပြရန်ထိုနေရာတွင်သင်၏လမ်းကိုရှာရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ နိုင်ငံအနေဖြင့်သင်သည်သူတို့၏တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်စကားလုံးများရရှိလိမ့်မည် ဒီဆိုဒ်ကိုလက်တင်အဘိဓာန်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုအသုံးပြုသူကမောင်းနှင်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်စကားလုံးအသစ်တွေသင်ယူမယ်ဆိုရင်ပါ ၀ င်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
Lecturas Paso တစ် Paso :
ဤသည်အခမဲ့ site ကိုစာဖတ်ခြင်းအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာစပိန်အတွက်လုံးဝဖြစ်ပါတယ်။ လျင်မြန်စွာသင်ယူဖို့ပိုကောင်းဘာမျှမ! ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျကိုလမ်းပြပါစေ! သငျသညျလညျး, အရင်ကဆိုရင်များအတွက်သင့်လျော်သောအလယ်အလတ်နှင့်အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ခန်းရှိသည်။
အယ်လ် Conjugador :
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါဟာစပိန်လိုဘယ်ကြိယာကိုမဆိုချိတ်ဆက်ခွင့်ပေးလို့ပါ။ သင်၏ကြိယာကိုထည့်။ "Spanish conjugation" ကိုကြည့်ရန် conjugate ကိုနှိပ်ပါ။ အသုံး ၀ င ်၍ လွယ်ကူသည့်အပြင်သင်၌လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ဂိမ်းများနှင့်သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းများရှိသည်။
Karim က JOUTET, စပိနျဆရာ, ဤ blog မှတဆင့်စပိန်အတွက်မိမိအသက်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုများ, စပိနျယဉ်ကျေးမှုသူ့ရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်း။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုအဖြစ်သူအရင်ကဆိုရင်စပိန် stepper များအတွက်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်ပေးသည်။ သငျသညျမိမိအ YouTube ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်ယူလိမ့်မည်သည့်ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုအပိုင်းရှိသည်။ တစ်ဦးကစစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံကိုဝေမျှနှင့်လူ့!
တင်းမာနေ, စာကြောင်းများ, ကြိယာ, နာမ်စား, ဖိုင်လင့်များပါသည့် ... သင်ကစနစ်တကျပြောဆိုရန်လေ့ကျင့်ခန်းကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြား: ဒီအခမဲ့ site ကိုသဒ္ဒါဖို့လုံးဝဆက်ကပ်အပ်နှံတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်! ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမဆင်ခြေ! သငျသညျလညျးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းရေးသားခြင်းပါပြီ။
လက်လှမ်း, ဗီဒီယိုနှင့် podcasts တွေကိုဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူဖို့အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းရှိပါတယ်။ ပျော်စရာ and Play လမ်းရှိခြင်းနေစဉ်, သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အချိန်မရွေး interactive သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့စပိန်၌သင်တို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များ, ဗီဒီယိုသို့မဟုတ် YouTube ချန်နယ်ကယ်နှုတ်တော်မူ။
ဤသည် podcasts တွေကိုပူဇော်သောထိပ်တန်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တဦးတည်းပါ! ဆိုက်တစ်ခုအလယ်အလတ်နှင့်အဆင့်မြင့် Level ဖြင့်လူတို့အဘို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်သတိပြုပါ။ ဤရွေ့ကား, podcasts ဖြစ်စဉ်များနှင့်ထုတ်လွှတ်မှု၏ပုံစံ၌ရှိကြ၏။ သူတို့ကသငျသညျအသုံးဝင်သောတစ်ခုခုကိုနားထောင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများအပေါ်တစ်ဦးအလွန်တိကျတဲ့ဝေါဟာရကျွမ်းကျင်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်: ဖျော်ဖြေရေး, ဂေဟဗေဒ, နိုင်ငံရေး, စီးပွားရေး, etc ကြောင်း၏ထိပ်တွင်သင်သည်တစ်ခုချင်းစီဇာတ်လမ်းတွဲများအတွက်ဝေါဟာရကတ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဖြစ်နိုင်သငျသညျအပတ်တိုင်း, ပိုကောင်းတဲ့ဝါးမြိုခြင်းကမ်းလှမ်းသည့်လွယ်ကူသောစပိန်နှင့်သင်ကြားရေးများအတွက်အဆင်ပြေအောင်အရှိန်အဟုန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်လက်ခံသမျှသောရန်ခွင့်ပြုသည်သောအကောင်းဆုံး Podcast တခုကို site ကို!
ဤ site အရင်ကဆိုရင်ဗီဒီယိုသင်တန်းများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုစာရင်းပြုစု: အသက်တာ၏မြင်ကွင်းများနှင့်တူအပြန်အလှန်ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုအရောင်အဆင်း, ဂဏန်း, etc အာရုံစိုက် သင်တို့သည်လည်းလေ့ကျင့်ခန်း, ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိသဒ္ဒါပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဗီဒီယို3နှင့်6မိနစ်အကြားကြာနှင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာများကိုတစ်ဦးမှတ်တမ်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ အရင်ကဆိုရင်နှင့်အရင်းအမြစ်များအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောမဟုတ်ဘဲအလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. , ပါမောက္ခဗီဒီယိုများအကြံပြု, ဒါကြောင့်သင်စပိန်ထက်အခြားလုံးဝအားလုံးကျောင်းမှဘာသာရပ်များအပေါ်အွန်လိုင်းသင်တန်းများမှအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်အတိုင်းဤ site ၏ကြီးမားသောအားသာချက်ပါ! အနည်းငယ်သောတည်းဖြတ်မူတစ်ခါတစ်ရံထိခိုက်စေပါဘူး။
ဤ site အင်္ဂလိပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အတန်းများနှင့်ချဉ်းကပ်နားလည်ရန်အင်္ဂလိပ်စာကိုအနည်းငယ်အသိပညာရှိသည်ဖို့အကြံပြုသည်။ သငျသညျ, podcasts ၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူတိုးတက်သောသင်တန်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏အဆငျ့ရှေးခယျြနှင့်သင့်အထုပ် (အပိုတာဝန်ခံ) upload ။
ဤ site စပိန်၏ကောင်းတစ်ဦးအဆင့်ကိုဆည်းပူးဖို့ဝေါဟာရနှင့်သဒ္ဒါသိမ်းသွင်းရန်စံပြဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျ Kara-, တစ်ချိန်တည်းမှာသင်နှင့်မာကု, သင့်ရဲ့ဆရာသိတော့သူကိုကျောင်းသားတစ်ဦးကအဖော်ပါလိမ့်မည်။ တနည်းကား, ဒီ site အင်္ဂလိပ်လိုသည်နှင့်အရင်ကဆိုရင်များအတွက် 80 မိနစ် 15 ထုတ်လွှတ်မှုတစ်ခုချင်းစီကို 20 ပေးထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပါးစပ်နှင့်စာပိုဒ်တိုများနှင့်သဒ္ဒါဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့စပိန်တိကျမ်းစာ၌လာသည်တိုးတက်ရန်လိုသောပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိစာသင်သားများအတွက် podcasts တွေကိုလည်းရှိပါတယ်!
တချို့ကအကြောင်းအရာသင်သည်လည်းသင် (မတူညီတဲ့အဆင့်ဆင့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသော 4) ဝယ်နိုင်အထုပ်ရှိတကယ်တော့အတွက်ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
ဤသည် Podcast တခုကိုစတင်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကတဦးတည်းသင်ခန်းစာသိမ်းသွင်းခြင်းနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့သင်ယူဖို့သင်အချိန်အရွက်သည့်နေ့ကဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပါမောက္ခပွငျသစျထဲတွင်နှေး, ရှင်းလင်းသောအသံစပိန်ဝေါဟာရ၏အများဆုံးဘာသာပြန်ထားသော။ သဒ်ဒါ, စာပိုဒ်တိုများနှင့်အသုံးအနှုနျးမြား၏အချက်, ဝေါဟာရ: သင်ဆဲအများအပြားပာအကြားရွေးချယ်မှုရှိသည်။ အဆိုပါ site ကို 300 စာရင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူအလွန်အလိုလိုသိနှင့်ရိုးရှင်းပါသည်။ အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအခြေစိုက်စခန်း။
ထိထိရောက်ရောက်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာသင်ယူဖို့, အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိကိုသွားနှင့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှု၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပျက်ကွက်အမြဲala carta, အဲဒီမှာမရပျနိုငျတီဗီရှိုး, ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်စပိန်ရေဒီယို station တစ်ခုအကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက်အရာတစ်ခုခုနှင့်လျင်မြန်စွာကြီးမြတ်တိုးတက်မှုစေ!
ဤ site ကအီကှဒေါအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည် "အဲဒီမှာ Radialistas Apasionadas Apasionados ။ "
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များ, ပထဝီ, သမိုင်းအဖြစ်ခေါင်းစဉ်ဖြေရှင်းရန်များစွာအသံဖိုင်တွေကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် ... သင်သည်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဗီဒီယိုများပြပွဲနှင့်ကွန်ဖရရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ မှတ်တမ်းများအဘို့, သင်ပိုကောင်းဗီဒီယိုသိမ်းသွင်းရန်ကူညီပေးပါမည်သည့်စာသားဖိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစပ်စုဘို့အရောအနှော G နဲ့စပိန်၏စစ်မှန်သောယဉ်ကျေးမှု။
Holamigo - စပိန်သင်ယူ :
စပိန်ကြိယာထဲမှာထောငျခြော, ဘုံအမှားတွေ, စပိနျအသံထွက်အတွက်စကားစမြည်: သင်တန်းအမျိုးအစားများနှင့်လက်တင်ယဉ်ကျေးမှုဗီဒီယိုများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ယူကျု့ချန်နယ်။ အရာအားလုံးကိုသင်ကဘာသာစကားနားလည်ကူညီရန်ရှိပါ! အဆိုပါဗီဒီယိုများ, တိုတောင်းသော format နဲ့အာရုံစိုက်နှင့် cramming မဟုတ်နေဖို့အရှင်ပိုမိုလွယ်ကူများမှာ!
Aprende español con Saby ¡! :
52 000 ယူကျု့ချန်နယ် subscriber များအား, Saby အချို့အလွန်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဗီဒီယိုများအတွက်စပိန်သင်ပေးတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုများအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စပိနျသို့ဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူပုံရိပ်တွေနှင့်အတူစုံစုံရှိပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ဝေါဟာရကြွယ်ဝစေ။
ဇာတိစပိန်စပီကာကမှတ်တမ်းတင်ကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းနားထောင်ရန်အသံဖိုင်ဖိုင်တွေကိုတစ်ဦးကဟုတ်မှန်သည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဒေတာဘေ့စ။ podcasts (2 မိခန့်) အလွန်တိုတောင်းသောဖြစ်ကြသည်ကိုသူတို့အလွန်ကောင်းစွာ CEFR (ဘာသာစကားများကိုများအတွက်ကိုးကားစရာ၏ဘုံဥရောပမူဘောင်) တွင်ဒီဇိုင်းနှင့်ရေးထားလျက်ရှိ၏။ အသိဥာဏ်ရည်ညွှန်း, သင်တကယ်တော့ .. သော့ချက်စာလုံး, အသက်, အဆင့်ဆင့်, ဘာသာစကား, အချိန်အားဖြင့်အလွန်သုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသင့်ရဲ့ရှာဖွေမှုများကိုစေနိုင်သည်။ ပျော်စရာများနှင့်ခွဲဝေမှုနှင့်အတူစပိန်သင်ယူဖို့တစ်ဦးကအကြီးအလမ်း။
သင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပျော်စရာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းလျင်မြန်စွာကြောင့်သာယာသောအခြေအနေများ၌ပြစ်မှားမိသောအခါသင်ယူခြင်းများအတွက်အရသာဆည်းပူးနိုင်သည်! ထိုအသင်ပျော်စရာ၏သင်ယူမှုနှင့်ရောနှောများအတွက်အများအပြားအရင်းအမြစ်များကိုစာရင်းပြုစုထားသောဤအပိုင်း၌တည်ရှိ၏: ဂိမ်းများ, သီချင်းများ, ဗီဒီယိုများ, လူမှုကွန်ယက် ...
စကားများနှင့်အတူကစားနေစဉ်အတွင်းသင်ယူဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ site ကို! ပျော်စရာသင်ယူခဲ့လျှင်စကား 1500, 215ဘာသာစကားများနှင့်ဂိမ်းများရာပူဇော်သက္ကာကိုဒီ site အားဖြင့်သင်တို့၏ဝေါဟာရနှင့်အသံထွက်ကိုခိုင်မာအောင်။
ပိုပြီးအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအများအပြားဂိမ်း! ထို့နောက်သင်သည်များစွာသောဂိမ်းကနေရှေးခယျြနိုငျအပိုင်းတခုစီမှာ, ပထမဦးဆုံး4အခက်အခဲအဆင့်ဆင့်တို့တွင်အ Choose: စသည်တို့ကို crosswords, ယုတ္တိဗေဒဂိမ်းများ, ပဟေဠိ, မျိုးစုံရွေးချယ်မှုမေးခွန်းများကို, A ကောင်းဆုံးအခမဲ့ဒေတာဘေ့စများနှင့်လုံးဝမယ့်သင်တို့အဘို့စပိန်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။
ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာရဲ့စပိန်သီချင်းဆိုလေ့လာပါ။ လွယ်ကူသော, အလတ်စားနှင့်အခက်ခဲ: သင်ကဒီ site ပေါ်တွင်သုံးအခက်အခဲအဆင့်ဆင့်သို့ခွဲခြားစပိန်သီချင်းတွေကိုတစ်ဦးရွေးချယ်မှု, လိမ့်မည်။ ကစားနေစဉ်ကသင်ချင်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင်အများအပြားသည် Modes ရရှိနိုင်ပြဇာတ် button ကို click နှိပ်ပြီးတာနဲ့: ကာရာအိုကေ, အစပြုသူ, အလယ်အလတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူ! သင်ယူဖို့အလွန်မူရင်းနှင့်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
80 နေ့ရက်ကာလ၌ဥရောပ၏ခရီးစဉ် - စပိန် :
ဘာသာစကားငယ်များဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေသင်ကြားလိုသောလူငယ်များအတွက်ဘာသာစကားမျိုးစုံသင်ယူနိုင်သော site တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားသင်ယူမှုအဆင့်သုံးဆင့် - စကားလုံးများနှင့်အသုံးအနှုန်းများကိုနေ့စဉ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း။ အခြားအဆင့်များမှာပိုမိုအဆင့်မြင့်ပြီးသင်၏ဗဟုသုတကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေပြီးသင့်အားယဉ်ကျေးမှုနှင့်စပိန်ဘာသာစကားတို့နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ဒီ site ပေါ်တွင်တင်ပြနည်းလမ်းသည်အတော်လေးပျော်စရာနှင့်ဆန်းသစ်သည်။
လကျတငျပြည်ထောင်စုပဏာမခြေလှမ်းမှာ created ဤသည်ဗီဒီယိုဂိမ်း,, အွန်လိုင်းစပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီသင်ယူဖို့အသစ်တစ်ခုလမ်းပေးထားပါတယ်။
ဘိုအယူအဆသင်သည်စိန်ခေါ်မှုများတစ်စီးရီးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ထားတဲ့အတွက်ဘာသာစကား labyrinth ၌သငျယူကြောင်း ludo-didactic အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်စားမှုများနှင့်နည်းဗျူဟာကြောင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်မဟုတ်ဘဲဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်မည်သည့်အသက်အရွယ်မှာသင်ယူဖို့ကသုံးနိုင်သည်။
ဖလှယ်အပေါ်အခြေခံပြီးဘာသာစကားဖလှယ်မှုများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်း။ သင်သည်သင်၏မိခင်ဘာသာစကားတနာတစ်ဦးမှလေ့လာသင်ယူနှင့်ပင်မိမိအဘာသာစကားမှာသူ့ကိုလုပ်! ဤနည်းအားလူမှုရေးကွန်ရက်ပလက်ဖောင်း၌, သင် 180 + နိုင်ငံတွေထဲကနေလူတွေဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အခြားဘာသာစကားများ 110 စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ သင်အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်ဆိုင်သောစိတ်မျှဝေတဲ့အသိုင်းအဝုိင်းနှင့်အတူလေ့ကျင့်မည်, သိနားလည်ကြ၏။ ရည်ရွယ်ချက်မှာချက်တင်မှတဆင့်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားဖြင့်ဆွေးနွေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ App တစ်ခု iTunes နှင့် Google Play တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သေးတစ်ချိန်ကအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီး, ဒီပလက်ဖောင်းသင်သည် downloads, ဖတ်ရှုခြင်း, အဘယ်သူမျှသင်တို့အဘို့အုပ်ထိန်းသူ, အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စကားစမြည်အတွက်ပါဝင်မှုအားဖြင့်သင်တို့၏ဝေါဟာရသင်ယူတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးပါမည်။ လူမှုရေးကွန်ယက်အားပိတ်ရန်, သင်ကမ္ဘာတဝှမ်းသင်တို့ကဲ့သို့လူတွေကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါမဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့နေအိမ်၏အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်တစ်ဦးခြေကုပ်ရှိသည်ဖို့?
iTunes နှင့် Google Play တွင်လည်းရရှိနိုင်
730,000 အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကအသိုင်းအဝိုင်းယနေ့။ ဆိုက်သငျသညျလုနီးပါးသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာသာစကားကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုတွေ့ဆုံရှိလူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်အဖြစ်တစ်ဦးအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားထားပေမယ့်ကိုယ့်အဖြစ်ဖော်ရွေ။ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအများပြည်သူသောနေရာများသို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်များတွင်ကျင်းပကြသည်။ လေ့ကျင့်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်လေယူလေသိမ်းအဘို့မကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းရှိသည်ဖို့ပျက်ကွက်ကျနော်တို့ပြင်သစ်, စပိန်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တင်တူညီနှင့်အတူကျနော်တို့အကောင်းတစ်အသံထွက်ရှိခြင်း၏အတော်လေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သင်ရုံညာဘက်အရင်းအမြစ်များနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိတစ်ခုထိရှိသည်နှင့်ငါတို့ကဒီမှာသင်ပူဇော်ယျ။
မိမိတို့ကိုယ်ကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရသောစကားများအသံထွက်အပေါ်သီးသန့် based တစ်ဦးကပလက်ဖောင်း။ သင်အရမ်းရိုးရှင်းစွာပဲရှာဖွေရေးဘားထဲသို့စကားလုံးများကိုရိုက်ဆိုက်စပိန်အသံထွက်အပေါ်အခြေခံပြီးစကားများသင်တို့၏ကွဲပြားခြားနားသောမှတ်တမ်းများရုတ်သိမ်းပေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင် 127.504 စကားကနေသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အာရုံစိုက်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါနဲ့ရှေးခယျြ!
ဘာသာစကားများစွာနှင့်အသံထွက်အသံစစ်အသံနှင့်အွန်လိုင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပိုမိုလွယ်ကူပြီးလက်တွေ့ကျသောအရာမရှိပါ။ သင်လုပ်ရန်မှာ“ စပိန်” အကွက်ကိုစစ်ဆေးပြီးသင်၏စကားလုံးအားရှာဖွေဘားတွင်ရိုက်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အသံထွက်ကိုနှိပ်သောအခါ၊ ထိုစကားလုံးသည်သင်၏စကားလုံးပေါ်ရှိအထူးစာမျက်နှာတစ်ခုသို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်အသံထွက်အသံဖိုင်ဖိုင်၊ အခြားဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းများကိုတွေ့နိုင်သည်။ အနည်းငယ်သောထိတွေ့မှုသည်စကားလုံးတစ်ခုစီ၏ခက်ခဲသောအသံထွက် (လွယ်ကူသော၊ ခက်ခဲသော၊ အလွန်ခက်ခဲသော) မဲပေးသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။
ဒီဆိုဒ်သည် "ဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်" စတိုင်အသံထွက်ဗားရှင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ တကယ့်စပိန်အသံထွက်ဘာသာပြန်သူ - စာသားကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ရေးပြီးနားထောင်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်လေ့ကျင့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည်စံသို့မဟုတ်မက္ကဆီကန်စပိန်အကြားရွေးချယ်မှုရှိသည်။ အပျော်အပါးအမျိုးမျိုးကွဲပြားသောအရာ!
မာတင် Tele တီဗီ :
မာတင်ဗီဒီယိုများ၌သင်တို့၏အသံထွက်သင်ယူတိုးတက်လာဖို့ပိုကောင်းဘာမျှမ, စပိန်၏လမ်းများအားဖြင့်သင်တို့ကြာ! သငျသညျအရာခပ်သိမ်းလည်းမရှိ, ဆောင်ပုဒ်တို့ကခွဲထားခဲ့သည်ဖြတ်သွားဖြတ်လာ, ရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ်များနှင့်ဝေါဟာရအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းပုံမှန်အသုံးအနှုန်းတွေကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်ပင်စစ်မှန်သောဒေသခံများ၏လေကြောင်းနဲ့ဘီယာအမိန့်မှ 10 နည်းလမ်းများကိုလေ့လာသင်ယူမည်!
ဗွီဒီယိုများသည်မူရင်းနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည်။ “ စပိန်ကိုအလေးပေးသော” နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုမှာယဉ်ကျေးမှု၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းတို့ပေါင်းစပ်ထားသည်။
မိုဘိုင်း application များမှတစ်ဆင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ယူပါ
ဤအပိုင်းကိုအပေါ် Mobility ကိုနှင့်ရိုးရှင်းအတူတကွ!
ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားဆုံးမဩဝါဒပေးဘို့အကြီးမှူးမတ်ထိပ်မိုဘိုင်း application များသုတေသနပြုခဲ့ကြသည်။ အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသင့်ရဲ့စပိန်ဆရာယူပါ။ သင်ယူလွယ်ကူတာဝန်တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်!
4,49 ယူရိုများအတွက် MosaLingua လျှောက်လွှာ, ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်တို့နှင့်အတူအယူမယ့်စစ်မှန်တဲ့စပိန်ဆရာပါ! မိမိအ method ကိုသငျသညျအလွန်လျင်မြန်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်, ဝေါဟာရနှင့်စတော့ရှယ်ယာစာပိုဒ်တိုများသင်ယူဖို့ခွင့်ပြုမယ့် space အထပ်ထပ် system ပေါ်တွင်နေရာချနေပါတယ်။ အသံထွက်, ဝေါဟာရ, comprehension: အဆိုပါ app ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအပေါ်အခြေခံသည်။ သိမ်းသွင်းဖို့အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝကိုသင့်အသိပညာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါတဆယ်အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်ပေါင်း: သင်၏စူပါကို virtual ဆရာမသင်သည်သင်၏သင်ယူမှုလစျြလြူရှုတဲ့အခါသင်သတိပေးရန်တွန့်ဆုတ်မပေးပါဘူး။
ဖတ်ရန် အင်္ဂလိပ် Learn ရန်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်၏ထိပ်တန်း
Nemo စပိန် :
Nemo application ကို iTunes ကသို့မဟုတ် Google Play တွင်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကမှတ်တမ်းတင်ထောက်ခံမှုအသံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေါင်းစပ်နေသောကြောင့်ဤလျှောက်လွှာကို, အသံထွက်အာရုံစိုက်။
The plus: ၎င်းသည်အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုနေရာကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအပြည့်ဖြင့်တည်ဆောက်ရန်သင့်အတွက်မူတည်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအခြေခံကိုအဓိကထားတဲ့အသုံးအများဆုံးစကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုအခြေခံထားတာပါ။ စစ်မှန်သောသင်တန်းမရှိပါ။ သင်လိုချင်သောအတိုင်းလေ့လာရန်တိုးတက်သော၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသည့်ပညာရေးဖြစ်သည်။
iPhone နှင့် Android တွင်, စပိနျသင်ခန်းစာတစ်ဦးပေးဆောင် application ကို 3,59 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
မိမိအနည်းလမ်းကို: စပိန်ပြည့်အဝနဲ့အော့ဖ်လိုင်းသဒ္ဒါ, conjugation, ဝေါဟာရမှတဆင့်များနှင့်အပြန်အလှန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ကစားစဉ်အတွင်း။ တစ်ဦးကအကြီးအပလီကေးရှင်းများနှင့်သွန်သင်ခြင်းဟာအလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး, သငျသညျမြားကိုလညျးသင့်အသံထွက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ယနေ့အထိအများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိဘို့ app တစ်ခုကြောင့်ဖျော်ဖြေမှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ သငျသညျမွနျမွနျတဲ့ပန်ကာဖွစျလာနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နိယာမအကျိုးကိုစနစ်ကတဆင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သငျသညျအသီးအသီးမှန်ကန်သောအဖြေများအတွက်အချက်များဝင်ငွေနဲ့တိုင်းမကောင်းတဲ့ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်နေ့လျှင်ငါးမိနစ်တိုတောင်းသောသင်ခန်းစာများမှတဆင့်တဖြည်းဖြည်းတက်လိမ့်မည်ဟုကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ရှိသည်။ ဤသည်တန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်ခြင်းနေစဉ်သင်တစ်နေ့တာအတွင်းသင်၏အပေါက်တွေဖြည့်ပါကကူညီမည်! အဆိုပါနည်းလမ်းဘာသာပြန်ချက်လေ့ကျင့်ခန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Android နှင့် iOS ပေါ်မှာရရှိနိုင်။
Babbel ကဘာသာစကားနှစ်မျိုးလုပ်နိုင်တော့မည်မှဝါကြွားတတ်ကြောင်းပြည့်စုံ App ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေါဟာရသို့မဟုတ် tools များ: ဒါဟာ module တွေနှစ်မျိုးပေးထားပါတယ်။
ယင်း၏ပျော်စရာ interface ကိုနှင့်အတူသငျသညျအပြန်အလှန်လှုပ်ရှားမှုများ, ပါးစပ်နှင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားလေ့ကျင့်ခန်းကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ လျှောက်လွှာ၏အားသာချက်နေ့တိုင်းဆွေးနွေးမှုများကနေစပိန်သင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ tool ကသင်၏ဝဲအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်စကားသံကိုအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ သင်ခန်းစာများ, သူတို့ရှေ့မှာဒီထက်အချိန်ရှိသည်သောသူတို့အဘို့အလွန်အသုံးဝင် 15 မိနစ်ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အသိပညာဟစ်စပန်းနစ်တိုးမြှင့်ဖို့ဒါရုံတစျခုသင်ခန်းစာနေ့ဖြစ်၏။
Babbel နှင့်အတူစပိန် Learn အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အပြည့်အဝသင်တန်းဝင်ရောက်ဖို့, သင်တစ်လလျှင် 9,99 ယူရိုတစ် subscription ကိုဝယ်ယူရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျဂိမ်းများနှင့်စမ်းသပ်မှုမှတဆင့်ဘာသာစကား, အသံထွက်, စာလုံးပေါင်း, သဒ္ဒါ ... အပျော်အပျက်သင်ယူမှုရန်သင့်နားထောင်ခြင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုကွဲပြားခြားနားသောဝေါဟာရများသင်ခန်းစာများ, အသံဆွေးနွေးမှုများကို။ သငျသညျအမြန်သင်ယူမှုအားလုံးကို turnkey ပေးသည်တစ်ခုစံပြလျှောက်လွှာ။ ယင်း၏အော့ဖ်လိုင်း mode ကိုနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်စောင့်ရှောက်သင့်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မရှိတော့အနေနဲ့ဆင်ခြေဖြစ်လိမ့်မည်။
အသက်အရွယ်နုပျိုသောသင်ပိုမိုကျနော်တို့အလျင်အမြန်ထွက်ရမယ့်ဘာသာစကားသင်ယူဖို့ကိုစတင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏သားသမီးသို့မဟုတ်သင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖို့ attaque.Proposez ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မိုဘိုင်း app များကိုရွှေ့ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာလက်ရှိကစားဖန်တီးမှု, တိုတောင်းသင်ယူဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းနှင့်ကျောင်းမှဖြည့်စွတ်ပါ!
Educa ကလေးများဘာသာစကားများ :
၃ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကလေးများအားစပိန်ဘာသာကိုသင်ကြားရန်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များစွာရှိသောအလွန်ပြည့်စုံသော site တစ်ခု။ ဤ site ၏အားသာချက်မှာစပိန်ဘာသာစကားသင်ယူရန်သင်၏ကလေးများကိုထောက်ပံ့ရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ကမ်းလှမ်းထားသည့်ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများအများစုသည်အခကြေးငွေ ပေး၍ ရသော်လည်းအလွန်ကျယ်ပြန့်သော DVD များ၊ စာအုပ်များ၊ စီဒီများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊
ထပ်မံ၍ သွားရန်သူတို့သည်သင်လိုအပ်သည့်အပိုအနည်းငယ်ပေးရန်သင့်ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ရွေးချယ်သောပညာရေးဆိုဒ်များကိုလည်းကမ်းလှမ်းသည်။ အကောင်းဆုံးသောထောက်ပံ့မှုများမှာ PetraLingua နှင့် My First Words ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ကအပျော်အပျက်ကမ်ဘာပျေါတှငျလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်သင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်အတူသင်ယူမှုအတွက်ကိုယ်စားပြုသူရဲကောင်းများကျေးဇူးတင်နေ့စဉ်အသက်တာ၏ themes များဆွေးနွေးရန်နိုင်ပါတယ်။ မိသားစုနှင့်အတူမျှဝေသည်စွန့်စားမှုရန်သင့်ကလေးတွေကိုရှင်းလင်းရန်!
ပညာရေးဆိုင်ရာ software ကို:
သူငယ်တန်းကနေသင်တို့ကို French သို့မဟုတ်နိုးထ, သင်္ချာအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်ကောလိပ်အထိအတော်ကြာသည့်အကြောင်းအရာများရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့ကဒီမှာစိတ်ဝင်စားစပိန်ဂိမ်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကျောင်းအစီအစဉ်ကိုစဉ်အတွင်းသင်၏သားသမီးကူညီရန်လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပျော်စရာဂိမ်းပေါင်းစပ်သောအမှန်တကယ်အသိဉာဏ်ပလက်ဖောင်း။
လွယ်ကူသောဘာသာစကားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော“ Holà” ဟုခေါ်သောမိုဘိုင်း application ။ သင်၏ကလေးများသည်သီချင်းများ၊ ဂိမ်းများ၊ ပုံပြင်များနှင့်စာအုပ်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ Snow White၊ စင်ဒရဲလား၊ Sleeping Beauty ကိုဖြတ်သန်းသွားသောပုံပြင်များသည်သင်၏ကလေးများအားအသုံးအနှုန်းအသစ်များနှင့်စကားလုံးအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုငြီးငွေ့စေမည့်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဂီတရောနှောခြင်း ဂိမ်းများသည်ကဒ်ပြားများကစားခြင်း၊ စာမျက်နှာတစ်ခုကိုအရောင်ခြယ်ခြင်း၊ ခန့်မှန်းခြင်းစသည့်အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကစာအုပ်ဝယ်ဖို့လည်းပေးထားတယ်၊ ပထမကတော့အခမဲ့ဖြစ်တယ်။ သင်ကအကောင့်တစ်ခုတည်းကိုပဲဖုန်းသုံးပြီးကြည့်ရှုနိုင်တယ်။
အပျော်အပျက်တူညီမူအရအပေါ်အခြေခံပြီး, ဒီပလက်ဖောင်း, ထိုကဲ့သို့သောစပိန်ယဉ်ကျေးမှုသင်ယူဖို့, ဘာသာစကားကိုသင်ယူဖို့အပြင်, ခွင့်ပြုဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, ပဟေဠိ, မှတ်ဉာဏ်ဂိမ်းအဖြစ်ဖျော်ဖြေရေးသီချင်းတွေကိုကမ်းလှမ်း! အဘယ်အရာကိုသူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကအမြဲဖြစ်ရန်မလိုဘဲ, သင်၏သားသမီးများ၏စိတ်ထဲတွင်ဖွင့်လှစ်။ လုံးဝအခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်!
သင့်ရဲ့အဟောင်းများကိုထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းက5နှစ်ပေါင်း 10 ရန်အဘို့အနောက်ထပ်မိုဘိုင်း app (iOS နဲ့ Android) ။ သူတို့ဟာ 200 လှုပ်ရှားမှုများကျော်နှင့်အတူတစ်ဦးသီးသန့်ပါးစပ်နည်းလမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးမှတဆင့်တစ်ဦးပျော်စရာနဲ့အလိုလိုသိကမ်ဘာပျေါတှငျဗတ္တိဇံကိုခံရလိမ့်မည်! အလွန်ကိုအသုံးဖို့လွယ်ကူ, သင်၏ကလေးတွေကိုသင်သိပ်ချစ်ကြလိမ့်မည်!
Plus အား: မိသားစုဝင်တွေ applications များ3Pili ပေါ့ပ်အင်္ဂလိပ်, Pili Pili ပေါ့ပ်ပေါ့ပ်Españolနှင့်ပြင်သစ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ကြေးပေးသွင်း။
ခြောက်လ module တွေပွင့်လင်း access ကိုလည်းပါဝင်သည်နှင့်လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်ရသော9နှစ် 13 တစ်ခုပရိသတ်ကိုတစ်သင်ခန်းစာ။ ဒီ site ၏ရည်မှန်းချက်ရိုးရှင်းစွာ Romance ဘာသာစကားများအပြန်အလှန်နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာခြောက်ဘာသာစကားများကာတာလ, စပိန်, ပြင်သစ်, အီတလီ, ပျေါတူဂီနှင့်ရိုမေးနီးယားဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် tool ကိုနှင့်အတူတကွထိုဘာသာစကားအားပေးအားမြှောက်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ယူမှုနှင့်ဆက်တိုက်မဟုတ်၏လုပျငနျးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။
ဒီကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူ, ဒွန် Quixote ၏ဘာသာစကားကိုသင်တို့အဘို့အဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရပါလိမ့်မယ်!
အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ရန်လမ်းညွှန်စပိန် Learn မေလ 21st, 2018Tranquillus
အောက်ပါVideo2Brain နှင့်အတူအလွယ်တကူသည်သူ၏ LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?